मोदीको ‘सम्मान’ अस्वीकार गर्ने यी ८ वर्षीया भारतीय बालिका ? - नेपाल घटना
मोदीको ‘सम्मान’ अस्वीकार गर्ने यी ८ वर्षीया भारतीय बालिका ?
प्रकाशित : २६ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०९:२४
भारतमा पर्यावरण सम्बन्धित अभियानमा सक्रिय रहेकी आठ वर्षीया बालिका लिसिप्रिया कञ्गुजमले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको प्रस्ताव अस्विकार गरेपछि चर्चामा आएकी छन् ।
भारत सरकारले आफ्नो नाम पनि उल्लेख गरेपछि लिसिप्रियाले धन्यवाद त भनिन् तर त्यो सम्मान स्वीकार नगर्ने बताइन्। उनले लेखिन्, “प्रिय नेता र राजनीतिक पार्टीहरू, मलाई यसको निम्ति प्रशंसा चाहिँदैन।
यसको साटो आफ्ना सांसदलाई जारी संसद् सत्रमा मेरो आवाज उठाउन भन्नुहोस्। मलाई आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य र प्रचारबाजीको साधनको रूपमा उपयोग नगर्नुहोस्। म तपाईँको पक्षमा छैन।” उनले प्रधानमन्त्री मोदी र सांसदहरूसँग जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन माग गरिरहेकी छन्।
लिसिप्रियाको प्रतिक्रियाप्रति सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आएका छन्। केहीले उनको ‘आँटिलो’ टिप्पणीको प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले उनलाई भ्रममा राखिएको बताएका छन्। केहीले त्यो ट्वीट उनले लेखेकोमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
ट्विटरमा उनको परिचयमा सो खातामा उनका अभिभावकद्वारा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। केहीले उनले भारत सरकारको अपमान गरेको धारणा राखेका छन्। उनको तुलना स्वीडनकी वातावरण अभियानकर्मी ग्रेटा टून्बेर्गसँग पनि गरिन्छ।
तर लिसिप्रियाले त्यो मन पराउँदिनन्। उनी आफ्नै परिचय भएको बताउँछिन्। उनले ट्विटरमा आफूलाई ‘एक बेघर पर्यावरण कार्यकर्ता’ भनेकी छन्। बीबीसी